10 Ka Tirsan Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo La Dilay. – Calamada.com
10 Ka Tirsan Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo La Dilay.
calamada June 21, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya degmada Qansaxdheere ayaa sheegaya in weerar gaadma ah oo ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay ku qaadeen maleeshiyaad taabacsan Xabashida Itoobiya uu dhaliyay Khasaara lixaad leh.
Dagaal muddo saacada ah socday KadibÂ ayay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayay deegaanka qabsadeen waxayna furteen 5 qori oo 2 kamid ay yihiin PKM.
Â War rasmi ah oo kasoo baxay xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay khasaara lixaad leh gaarsiiyeen maleeshiyaad ay ku sheegtay â€˜Murtadiinâ€™ oo loola jeedo ciidamada Maamulka Shariif Sakiin ee Xabashida Itoobiya taabacsan.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 16-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 17-09-1437 Hijri.